Muddo 12 Bilood oo Ah Oo Ay Xukuumada Madaxweyne Biixi Talada Dalka Haysay Maxaa U Qabsoomay Balanqaadkii Xisbigu Ololaha Ku Galay. |
Muddo 12 Bilood oo Ah Oo Ay Xukuumada Madaxweyne Biixi Talada Dalka Haysay Maxaa U Qabsoomay Balanqaadkii Xisbigu Ololaha Ku Galay.
Hargeisa(GNN):-13-kii Bishii December sanadkii 2017-ka ahayd isla maalintii loo caleemo saaray, isla markaana uu la wareegay hogaaminta dalka, ayaa loo dhaariyey xilka Madaxweynenimada Muuse Biixi Cabdi oo hadda muddo-xileedkiisu sanad jirsaday.
Muddo 12 bilooda oo Xafiiska uu joogay, waxa u badan ee ay Xukuumaddiisu qabatay waxa ugu waaweyn; xal u helida Colaado sokeeye oo ka dhacay deegaamo kamida Gobolada Bariga, samato-bixinta Deegaamo ay ku dhufatay Duufaantii Sagar, dhamaystirka mashruuca Maal-gelinta Dekedda Berbera, Shiiqinta Sicir-bararka dhanka lacagta, dib-u-habaynta iyo Diwaan-gelinta Shaqaalaha Dawladda iyo ku dhawaad toban kun oo Beeralay ah oo laga caawiyey dhanka dalaga wax soo saarka.
Marka laga yimaado qodobadaas, waxa kale oo muddadaas Xukuumadda Madaxweyne Biixi wax ka qabatay dhinacyada Kaabeyaasha dhaqaalaha, sida dhinaca Maaliyada, dhinaca Ganacsiga, Isgaadhsiinta, Waxbarashada iyo Caafimaadka, kuwaasoo waxa laga qabtay isugu jiraan Mashaariic hore u socday oo la dhamaystiray iyo kuwo sanadka la bilaabay oo dhamaystir iyo kuwo socda isugu jira.
Waxyaabihii u qabsoomay Xukuumadda Madaxweyne Muuse waxaynu u dhaafaynaa Barmaamujka Waxqabadka ee ay diyaarisay Xukuumaddu, balse waxaanu si madaxbanaan qormooyin kale ku falanqeyn doonaa arrimo badan oo dalka ka hacay muddadaas Sanadka ah.
Caqabadaha uu ku bilaabmay markii uu xilka qabtay Madaxweyne Muuse
Madaxweyne Muuse Biixi markii uu talada la wareegay billo kooban kaddib, waxa ku bilaabmay saddex faramood oo Dagaal iyo dhacdooyin bino-aadaminimo oo dabeeci ah.
Wakhti ku beegan Bishii May, ayuu Deegaanka Tukaraq ka qarxay Dagaal u dhexeeya Ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaadhay labada dhinac iyo baro-kac isugu jirta.
Ciidanka Somaliland ayaa gacanta ku dhigay Deegaanka Tukaraq, waxaanay jilibaha aasteen fadhiisimo dhinaca Bari iyo Koonfur kaga beegan Magaalada Tukaraq, halkaasoo ay iska-hor-imaadyo dhowr jeer dhacay ku dhex mareen Ciidamada Soomaaliya ee Maamulka Puntland.
Dagaalka Tukaraq iyo jiidaha kale ee ay Ciidamadu isku-horfadhiyaan wali xal lagama gaadhin, mana jirto ilaa hadda waan-waan maxali ah iyo mid dibaddeed oo si rasmi ah loogu soo afjaray Dagaalkaas, inkasta oo ay jireen dedaalo isku-day ah oo la sameeyey, kuwaasoo in yar shiiqiyey xiisada colaadeed.
Dagaalka Tukaraq wuxuu Xukuumadda Madaxweyne Biixi ku hafiyey xaalad colaaddeed oo aanay u feedho adkaysan, saameyna ku yeellatay degenaanshiyihii siyaasaddeed iyo barmaamujyadii ku talo-galka u ahaa.
Isla wakhtiga uu socday dagaalka Tukaraq waxa dib u laba kacleeyey Colaad ehli ah oo sanadihii u dambeeyey ka taagnayd Deegaamo ka tirsan Gobolka Sanaag, gaar ahaan Nawaaxiga Degmada Ceel Afweyn.
Dagaalka u dhexeeyey labada beelood ee Gobolka Sanaag oo caabuqyadii ka dhashay sabab u noqdeen in Maleeshiyaad hubaysan oo uu hogaaminayo Sarkaal hore uga tirsanaa Ciidanka Qaranka Somaliland, u gooysteen dhinaca Puntland, ayey Xukuumadda Madaxweyne Muuse gelisay juhdi faro badan, kuna bixisay Dhaqaale faro badan oo aan ku talo-gal ahayn iyo wakhti, iyaddoo ergo ku dhow Boqol qof oo uu hogaaminayo Madaxweyne ku-xigeenka dalku muddo bil ah soo afjarida colaadaas u fadhiyeen Magaalada Ceel-afweyn.
Ergada ka howl-gashay Colaada Ceel-afweyn waxay isugu jireen Masuuliyiin Xukuumadda ka socda oo ay ugu sareeyeen Madaxweyne ku-xigeenka iyo Wasiirka Arrimaha gudaha, Guddi ka socda Culimo awdiinta, Madaxdhaqameedyo isugu jira Isimo iyo Cuqaal ka kooban Beelaha Somaliland iyo dad kale oo kamida haldoorka Bulshada.
Colaadaas oo aakhirkii lagu guulaystay daminteeda, balse utumooyinkii ka dhashay isugu jiraan qaar huursan iyo kuwo banaanka yaalla oo halis ku ah inay qumbiciyaan Heshiiska nabaddeed ee la dhigay Beelaha, waa maqnaanshiyaha iyo weerarrada ay intii nabadeyntu dhacday kaddib soo qaadeen jabhada Col. Caarre, ayaa iyaduna siyaabo kala duwan u saameysay dar-dartii iyo firinfircoonidii ay qabtay Xukuumadda cusub ee Kulmiye.
Isla Dagaalada Sokeeye, muddo yar kaddib markii laga soo laabtay Colaadii Gobolka Sanaag, waxa dagaal kale oo ehli ahi ka qarxay Gobolka Sool. Waxa deegaanka Dhumay oo dhinaca Koonfur kaga beegan Magaalada Laascaanood dagaallo ku dhex mareen laba Beelood oo walaalo ah, kuwaasoo isu geystay khasaare baaxadle oo ah dhimasho, dhaawac, burbur hantiyeed iyo baro-kac laxaadle.
Khasaare dhan 170 Qof oo Dhimasho ah iyo boqolaal kale oo dhaawacmay ayaa ka dhashay Colaada Koonfurta Gobolka Sool, waxaanay dawladdu iyadoo aan si fiican uga faro-maydhan tii Ceel-afweyn, kana muuqdo walaac gurmad hor leh ka gashay daminta Dagaalkaas.
Si ka duwan gogoshii Deegaanka Ceel-afweyn, ayaa wefti Xukuumadda ka socda, Culimo-awdiin iyo Madaxdhaqameedyo ka soo jeeda Gobolkaasi waan-waan nabaddeed u joogeen Magaalada Laascaanood iyo Deegaamadii dhibaatadu ka dhacday, waxaana jiray oo wali taagan duruufo ka hor istaagay Xukuumadda sanad-jirsatay inay colaada Sool si buuxda gacanta ugu dhigto, taasoo u muuqan karta hagrasho ama hamrasho mid uun, taasina waxay sababtay in gacanta Dawladda Somaliland ka baxdo dhexdhexaadinta labada beelood ee dhibaatada kala gaadhay iyo in doorka Xukuumadda Muuse ee qaboojinta colaaddaasi ku koobnaado inay Ciidan kala dhex dhigtay Maleeshiyaadka labada beelood ee ku sugan Deegaamadii ay ku dagaalameen, isla markaana aanay wali xaajaddii dhibaabuhu ku soo noqon fulinta Xukuumadda.
Labadaas Colaaddood ee Ehliga ahi waxay kamid ahaayeen faramaga dagaal ee ku furmay Madaxweyne Biixi isagoon Kursiga Madaxtinimada sanad ku fadhiyin.
Qodobka saddexaad ee faramaha ku furmay ayaa ah mid siyaasaddeed oo qayb ka ah hirdanka ka socda Geeska Afrika ee ay isbedelada ka dhacay Wadamada jaarku curadka u yihiin.
Madaxweyne Muuse wuxuu xilka la wareegay xilli uu qabyo yahay Mashruuca Maal-gelinta Dekedda Berbera ee ay Shirkadda ku yihiin Somaliland, Shirkadda Imaraadka laga leeyahay ee DPWORLD iyo dalka Itoobiya.
Waxa Heshiiskaas si weyn uga biyo-diidsanaa Dawladdaha Soomaaliya, Djibouti iyo Eritrea, kuwaasoo ujeedooyin kala duwan uga hor-yimi, walina ku howlan inaanu midho-dhalan noqon.
Dawladdahaas oo ay qaarkood ilaa iminka isu gaashaan-buuraysanayaan qorsheyaal suurta-galnimadoodu halis ku tahay Somaliland, waxay dagaal diblomaasiyadeed iyo mid faro-gelin siyaasaddeed oo gudaha ah ku soo qaadeen Dalka.
Inkasta oo Mashruuca udub-dhexaadka u ah weerarka diblomaasiyaddeed ee ay Xamar xudunta u tahay gabagabo yahay, Dhismaha Dekedda Berbera-na qalinka lagu duugay, haddana gujjo-dhadhinta iyo gaagixinta ka dhanka ah Somaliland ma dhamaan, waxaana muuqata inay Xukuumadda Madaxweyne Muuse gacmo debecsan kor ugu hayso culays baaxad leh oo lixdii bilood ee u dambeeyey ka soo fuulay dagaalka Diblomaasiyaddeed.
Dadka Falanqeeya Siyaasadda Gobolka ayaa u arka in legdanka Siyaasadda dibada Somaliland lagu liiliijiyey tan iyo bilowgii sanadkan, balse taas bedelkeeda ay haysato fursado badan.
Waxa la isku raacsan yahay inay Somaliland lumisay qayb ahaan danihii iyo xidhiidhkii ka dhexeeyay Dalka ugu tunka weyn ee Siyaasadda Gobolka hogaaminaya oo ah Itoobiya, laakiinse haddana ay jiraan xadhko aan wali go’in oo ka dhexeeyey.
Dagaalka ay ku jirtaa halkiisa ha ahaadee, Dad badan ayaa su’aal ka qaba meesha ay ku socoto iyo marxalada ay ku jirto Siyaasadda arrimaha dibada ee Somaliland, waxaana Madaxweyne Muuse sanadkii koowaad ee muddo-xileedkiisa u dhamaaday maalmo ay hortaallo aragtida uu qabo Cabdinaasir Maxamed Saacadaale oo ah Bare Jaamacaddeed oo wax ka qora siyaasadda Gobolka.
“Marka la soo urusho, waxa Soomaliland hor yaala waxyaalo badan oo ay kala dooran karto iyo wax badan oo ay iibin karto, waxaase run ah in aan doodii hore ee ahayd doorashaan qabsannaa iyo argagixisaan la dagaalanaa aanay sii iibgalayn! Sidoo kale, waxa run ah inaanay laba arrimood midna Soomaliland ku gaadhayn ujeedadeeda: u baarri ahaanshihii reer galbeedka ee bilaa shuruudda ahaa, iyo ku dhex wareeggii Afrika.
Mar labaad fursad weyn ayaa Somaliland hortaal, su aashu se waa ma ka faa’iidaysan doontaa oo ma akhrin kartaa dabaylaha isbadal ee dunida ka dhacaya xilligan?”.
Intaas marka laga yimaado, caqabadaha kale ee ka hor yimi waxa kamida utumihii Doorashada oo nugleeyey midnimada Shacbiga Somaliland, sababna u noqday niyad-jab iyo rejjo-xumo xisbiyada qaar ku rideen Shacbiga, iyagoo uga faa’idaysanaya xamaasadii Doorashada.
Duufaantii roobabka wadatay ee ku dhufatay inta badan dhulka Xeebaha iyo deegaamo kale oo Oogaad ah, waxay khasaare balaadhan oo naf iyo maalba leh gaadhsiiyeen Deegaamo badan, waxaana ka dhashay dhimasho dad iyo dhaawac Dhaqaale oo xadi badan, waana mid kamida caqabadaha dabeeciga ah ee ay waajahday Xukuumadda Madaxweyne Muuse bilowgii muddo-xilleedkeeda.
Dhibaatadii ka dhalatay duufaantaasi wali deegaamada qaar ayey raadadkii ka muuqdaan, inkastoo wax badan laga qabtay “Iminka kuma odhan karo Boqolkiiba intaasaa wax laga qabtay, laakiinse waxaan kuu sheegi karaa in wax badana la qabtay, wax badanina dhiman yihiin..”sidaasi waxa wariyeyaasha u sheegay Faysal Cali Sheikh oo ah Guddoomiyaha Hay’adda u diyaar-garowga Masiibooyinka iyo Kaydka Raashinka Qaranka.